Wasiirka Warfaafinta oo Shaaciyey in Masuuliyiinta Xisbiga WADDANI ka Maarmeen Waraabinta Qaranka |
Wasiirka Warfaafinta oo Shaaciyey in Masuuliyiinta Xisbiga WADDANI ka Maarmeen Waraabinta Qaranka
Wasiirku wuxuu jawaab adag ka bixiyay eedo ka soo yeedhay afhayeenka WADDANI
“masuuliyiintiisa sarsare WADDANI iyo murrashax Cirro ayaa ka maarmay TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa”
“Haddii ay baahi u qabaan TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa, annaga ayaa diyaar u ah ee ha ka soo qaybgalaan dood la dhex dhigayo saddexda xisbi”
“Masuuliyiinta xisbiga WADDANI waxay ku jiraan marxalad qiiq isku qaran ah”
Hargeysa(GNN):-Wasiirka Wasaaradd Warfaafinta iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland, Md. Cismaan Cabdilaahi Saxardiid (Caddaani), ayaa sheegay in masuuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ay ka maarmeen warbaahinta qaranka isla markaana ay hanjabaad iyo diidmo qayaxan kala horyimaadaan marka suxufiyiinta warbaahinta qaranku u tagaan.
Wasiirka Warfaafintu wuxuu jawaab adag ka bixiyey eedo ka soo yeedhay Afhayeenka xisbiga WADDANI, Ibraahim Mahdi Buubaa oo sheegay inuu dacwad ka dhan ah warbaahinta qaranka u gudbinayaan Komishanka Doorashooyinka oo uu ku eedeeyay inay aflagaadeeyaan madaxda xisbiyada mucaaradka ah.
Wasiirku waxa kaloo uu sheegay inaanay aqbalaynin in warbaahinta qaranka la aflagaadeeyo. “TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa waxay leeyihiin shuruuc warbaahineed oo la mid ah ta caalamka oo ay ku shaqeeyaan. Sidaas daraadeed, ciddina farogelin kuma laha tifaftirista wararkooda iyo barnaamijyadooda iyagaanna ka masuul ah,”ayuu yidhi Wasiirka Warfaafinta oo shirjaraa’id ku qabtay xafiiskiisa shalay.
Wasiirka Warfaafintu waxa uu xusay in markasta oo warbaahinta qaranku u tagaan xisbiga WADDANI ay kala kulmaan hanjabaad iyo diidmo cad, waxaannu yidhi; “Masuuliyiinta sarsare ee Xisbiga WADDANI oo uu ugu horreeyo murrashaxooda Cirro, ayaa ka maarmay TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa, waayo waxay kiraystaan oo lacag badan siiyaan Telefishannada badan, mar kasta oo weriyeyaasha iyo soosaareyaasha warbaahinta qaranku u tagaan madaxda sare ee xisbiga WADDANI si ay u waydiiyaan xogo, waxay kala horyimaadaan weriyeyaashaas canaan, aflagaado, hanjabaad iyo diidmo cad oo aan meelna loo soo marin.”
“Haddii ay dhab ka tahay inay baahi u qabaan TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa, sida ay ku andacoonayaan annaga ayaa diyaar u ah ee haddii ay run sheegayaan ha ka soo qaybgalaan dood la dhex dhigo saddexda xisbi. Masuuliyiinta xisbiga WADDANI waxay ku jiraan marxalad qiiq isku qaran ah. Idaacadda Radio Hargeysa ee ay wax ka sheegayaan waa hay’adaha dhifka ah ee aynu qaran ahaan ugu faanno ummadda afsoomaaliga ku hadasha oo dhan,”ayuu yidhi Wasiir Caddaani waxaannu intaas ku daray; “Ninka inta uu TV-ga iska soo fadhiisto oo ina Cirro soo dirayo, Cabdiraxmaan Cirro waa kii guddoomiyaha baarlamaankanna ahaaye miyaanu fahmin astaamaha qaranka iyo cidda uu madaxweynenimada ka doonayo, miyaanu garanayn in cidda uu madaxtinimada ka doonayaa ay muwaadiniintani (warbaahinta qaranku) ka mid yihiin. Laakiin ma aqbalayno mana yeelayno in shaqaalahayaga wax laga sheego, Ina Cirro ayaanaan ka aqbalaynin kuwa uu soo dirayna kama yeelayno.
Xisbigan fadhiidka ah ee Cabdiraxmaan Cirro inuu gurigiisa inan yar la galo mooyee ha waajaho adduunka. Kursigii dalka ugu sareeyay ayuu doonayaa waar waxa weeyaan ma u qalantaa oo ma lagugu aaminayaa dalkan?. Waxaanu la dhuudhuumaynayaa wuxuu ogyahay inaanu ka bixi karin dalkan, kuwii u dagaalamayay ee u caytamayey ayaa markay codka timaado ka tagey.”